कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज साउन-२४ गते शनिबारको रा’शिफल ! – iNews16
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज साउन-२४ गते शनिबारको रा’शिफल !
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) –बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा सहभागि भए पनि नतिजा आफुतिर ल्याउन राम्रै मेहनेत गर्नुपर्नेछ। बैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यापार व्यावसाय फस्टायर जानेछ भने बिदेशमा बसेर काम गर्नेहरुका लागि आजको दिन फलदायि रहनेछ। लामो दुरिको यात्राको अधिक सम्भावना रहेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धि सामान्य समस्याले सताउनेछ भने दैनिक काम गर्न असहज महशुस हुनेछ।
Previous कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज साउन-२३ गते शुक्रबारको रा’शिफल !
Next पाथिभराकाे दर्शन स्वरुप एक सेयर गर्दै साउन २५ गते आईतबारको राशि’फल हेर्नुहोस् ।
By user user 51 mins ago